Stringer - ubani lo?
Stringer - ubuthishela ukuthi sesifikile Russia esanda kutholakala (iminyaka 20-25 edlule). Yiqiniso, ngaphambi kokuba leso sikhathi, abezindaba yakhetha izinto zinikezwa abazisebenzayo. Manje kukhona abasebenzi kulendawo, ngubani asesabi ingozi ngenxa shot omuhle. Lokhu izintatheli khulula (ezizimele) okuyinto amakhanda futhi baklonyeliswa izithombe esiyingqayizivele noma ozimele.
Saqala ukukhuluma sina ngalokhu umsebenzi kuphela ngemuva kwengozi eyenzeke eChernobyl. Ngoba ke stringers abangekho ngokusemthethweni kunoma iyiphi ncwadi, wakhuluma iqiniso lento yayibuhlungu mayelana nale nhlekelele. Kwakuwusuku eChernobyl inhlekelele ukuthi iphoyinti, kusukela lapho ukunyakaza kuqala stringers ezweni lethu.
I cindezela ubabiza ngezindlela ezahlukene futhi "ngezokuvakasha" futhi "impisi oyedwa" sokulima on ngokwabo kuphela. Uyini umehluko izintatheli lolungakahleleki kubasebenzi? Stringers - laba yibo abantu abangakwazi ukwenza izinqumo zazo ngaphandle kokulinda kwemvume ababaphethe, futhi ngokushesha eyisebenzisa. Singasho ukuthi zingabantu sisonqenqemeni adventure, ingozi, umthetho nokungabi namthetho.
Ephendula umbuzo othi "Stringer -? Kuyini", Kungabakhona izimpendulo ezimbili kungenzeka. Proiskhoditt izwi kusukela English le Stringer, okuyinto "ziboshelwe", "Ubuhlobo obuseduze". Okokuqala, umuntu unesibopho edonsa izintambo ku-yethenisi e ithenisi neminye imidlalo. Okwesibili, Stringer - intatheli kanye freelancers ukusebenza kwabezindaba. Yakhe eqashiwe ukuqoqa isithombe kanye video imibiko ezindaweni ekhathazekile izindawo ezishisayo, lapho kukhona khona iziyaluyalu noma ukulwa. Lapho abezindaba ukubeka ulwazi lwabo, isixhumanisi emthonjeni, njengoba umthetho, abazi ucacise.
Stringers - ngubani?
Okokuqala, abahlinzeki tinsita letitibonwa nalokubhaliwe: bezithombe ezimele, bezithombe. Kungaphindze kube netikhatsi nomsakazo telereportory ukuthi ingxoxo kanye nokubika komhlaba imicimbi. Umsebenzi wabo ka extreme kakhulu: impi, ukuhlasela kwamaphekula, izinhlekelele zemvelo nokunye. Stringers - ochwepheshe. Ukuze umsebenzi bathola imali esezingeni elifanele. Abasebenzi kule mboni ungathandi nozakwethu kusukela izincwadi ezisemthethweni, ngoba lokho ziyasetshenziswa, ezimele, ephathekayo bese uthole imali eningi. Amandla akabathandi kubo, amasosha ngokuvamile inikezwe umsebenzi ngenhla: "Lezi ungamenzi e".
Kodwa naphezu kwezithiyo eziningi, naphezu enqabelo nezinsongo, lezi stringers ukuletha namakilasi abo kuze kube sekupheleni. Abakwazi ancike ku Kunoma ikuphi, akasoze anenzela phansi futhi ukuhlangabezana zokukhokha, kungani akunjalo zinkulu. Stringers imali eningi imali ngaphambi kokuqala ukwenza inzuzo. Imishini ekhethekile, travel, indawo yokuhlala, ukudla, njll - konke lokhu kwenziwa ngezithukuthuku intatheli. imishini ephukile "nezimpisi oyedwa" self elungisa noma ukuthenga esisha.
Independent, intatheli khulula iphila izimali zabo. He qamba inqubo zabasebenzi kanye banesibopho mayelana nokuphepha kwabo. Ngemva kwesikhathi esithile, kungenzeka ukuthi uyasho ukuthi isimo umagazini noma isiteshi sethelevishini. Kodwa iningi stringers uyalwazisa inkululeko, ngoba nethuba basebenze ngesikhathi esisodwa ezinkampanini ezimbili noma ezintathu.
Kukhona ithelevishini, okuyinto siyophetha ngenkulumo izintatheli inkululeko abathanda inkontileka lapho yena kwavuzwa zohambo, ngaphandle uma kukhokhwa imali ephezulu. Inani lomholo "umculi khulula 'akuxhomekile kuphela inani izithombe kanye amavidyo, kodwa futhi ngezinga lobungozi yena azichaye. Kukhona ezinye stringers, abahola inkulu ngokuphindwe kaningi kunemali nozakwabo njalo.
Ngakho, ngubani Stringer? Kuyini lokhu mkhakha? Futhi ubani kufanelekile?
Umuntu izimisele ukuphila okunokuthula futhi ezothola imali ezinzile, angeke abe Stringer.
Ngezinye izikhathi izintatheli kulesi siqondiso asiphili size siguge. Mayelana lolu lwazi kufanele sikhumbule wonke umuntu ufuna ukuba abe umbhali ezizimele.
Yini impendulo unamandla Stringer
Isibindi nokuzidela ukulondolozwa.
Initiative nokuphikelela kwamenza.
Ikhono ukuqonda abantu, izakhi kwengqondo.
Impendulo esheshayo, ukuhamba, kakhulu ukuqina engokomzimba.
Ikhono ukuqhuba inkhulumomphendvulwano nabantu yokuthola ulimi olulodwa.
Amandla ukusebenza, sithembele kuphela ngamandla abo.
Yini okufanele bazi futhi bakwazi "journalist"
Isithakazelo izenzakalo zamanje okuhlotshaniswa inqubomgomo, umnotho wembulunga yonke kanye kwamaZwe.
Uma usebenzela phesheya, odinga ukukwazi izilimi eziningana.
Uma umuntu enomuzwa iziyaluyalu sezinzwa nangokwengqondo.
Uyahlupheka ukuhlukumeza of the system zemisipha.
Izifo uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi kanye zokuphefumula.
iziyaluyalu Okungalapheki umbono nokuzwa.
umsebenzi ongekho emthethweni
Lokhu umsebenzi akubonakali khona, futhi abantu abenza leli bhizinisi, kungakhathaliseki ukuthi umthetho. Avame amacala enkohlakalo isimo sokugxeka sethusa futhi ngokuthi stringers - okusho "iphisi khulula." Yini empeleni basuke ukwenza, ligubuzelwe i aura romantic futhi nobuqhawe.
It stringers ongabonisa zempi enjalo njengoba kunjalo, nazo zonke izinto ezinyantisa umzimba kanye nomlando samanje. Lezi isibhamu kubangele ingxoxo kakhulu futhi ukuya empini. Siyabonga kulaba bantu, singabona ukuthi kwenzekani ngokoqobo. Ziyamkhipha izinhlamvu bangagqashula ikhamera, ukushaya nokubopha izintatheli. Ezweni kwabasebenzi kulo mkhakha kukhona mayelana ayisikhombisa. ERussia, hhayi ningi than 15 stringers okhokhelwayo. Ubani lo mkhakha, sizokwenza kafushane watshela kulesi sihloko.
Cloud ubuchwepheshe kwezemfundo. -akhawunti yomuntu siqu ye uthisha kanye umfundi
I-Vela Hotel Icmeler 3 * (Icmeler, Marmaris, Turkey): incazelo nokubuyekezwa kwezivakashi
Ukuphuza i-collagen: izibuyekezo odokotela
Zemvelo Faraday: Biography, ukuvulwa
Imininingwane PSB C 35. Wall ukwahlukanisa polystyrene PSB-35 C